सिंहदरबारभित्रै घट्यो यस्तो घटना, १ जनाको मृत्यु, को हुन् उनि ? – Sandesh Press
June 19, 2021 96
काठमाडौँ । सिंहदरबारभित्र निर्माण भइरहेको संसद भवनबाट खसेर एक युवकको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार निर्माणाधिन भवनबाट खसेर रसुवा नौकुण्ड गाउँपालिका–४ घर भई हाल सोही भवनमा बस्दै आएका १८ वर्षीयको युवक भीमा दोर्जेको मृत्यु भएको हो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी रमेश बस्नेतका अनुसार शुक्रबार राति ११ बजे भवनको तेस्रो तलाबाट उनी खसेका थिए । उनलाई उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा राति साढे ११ बजे उनको मृत्यु भएको हो ।
Prevपतिलाई आफु भन्दा धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ ? यी ५ गल्ती नगर्नुहोस्, बिग्रिनसक्छ सम्बन्ध
Nextनेपालीहरु रियल हिरो हुन् भन्दै डब्लुएचओ प्रमुखले गरे यसरी तारिफ